နေမာရဲ့ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပမာဏကို ဟာဇက် ကျော်ဖြတ်နိုင်မလား
16 Jul 2018 . 3:46 PM
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ သူတို့အသင်းရဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်တောင်ပံကစားသမား ဟာဇက် Hazard ကို ရီးယဲလ်အသင်းက ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း(၂၀၀)အထိပေးပြီး ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင် ရောင်းချသွားမယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့ ဗြိတိန်မီဒီယာတွေက ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ဟာဇက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ထွက်ခွာမယ်လို့ အရိပ်အမြွက်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်အသင်းကလည်း သူ့ကို ခေါ်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတယ်။ ဟာဇက်က”ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့(၆)နှစ်တာကာလအတွင်း အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုအချိန်ဟာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို စတင်ရတော့မယ့် အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ သေချာတာကတော့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားအပြီးမှာ ကျွန်တော့်အနာဂတ်အတွက် အဖြေတစ်ခုထွက်လာမှာပါ။ ချယ်လ်ဆီးမှာ ဆက်ကစားမလား၊ လမ်းခွဲမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပေမယ့် Final Decision ကတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းပဲ ချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ကျွန်တော့်ကို ရောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင် ဘယ်အသင်းကို ကျွန်တော်သွားမလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့(မီဒီယာများကိုဆိုလို) သိပြီးသားပါပဲ”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။
အခုအချိန်မှာ ရီးယဲလ်အသင်းကလည်း သူတို့ရဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo ကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ကစားသမားတစ်ဦး မဖြစ်မနေ ခေါ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ဟာဇက်ကို ကြိုးပမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကတော့ ဟာဇက်ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လက်လွှတ်ခံဖို့ မရှိဘဲ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း(၂၀၀)အထိရမှ ရောင်းချသွားမယ့်အနေအထားပါ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့လည်း ဟာဇက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက PSG အသင်းကို လက်ရှိကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်(၁၉၈)သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ နေမာ Neymar ထက် ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟာဇက်ဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ (၂)နှစ်စာချုပ်ကျန်ရှိနေသလို ချယ်လ်ဆီးအသင်းက သူ့ကို တစ်ပတ်ပေါင်(၃)သိန်းအထိပေးပြီး ကမ်းလှမ်းဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့လည်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟာဇက်ကိုယ်တိုင်က ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ကစားခွင့်ရဖို့ ဆန္ဒရှိနေပုံရတာကြောင့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်မယ့်အနေအထားပါပဲ။ ဟာဇက်နဲ့ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ပုံပြင်က ဒီနွေရာသီမှာ အဖြေထွက်လာမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
Hazard အတှကျ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျ ပေါငျသနျး(၂၀၀)ရရငျ ရီးယဲလျကို ရောငျးခသြှားဖို့ရှိနတေဲ့ ခယျြလျဆီး
ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ သူတို့အသငျးရဲ့ ဘယျလျဂြီယံလကျရှေးစငျတောငျပံကစားသမား ဟာဇကျ Hazard ကို ရီးယဲလျအသငျးက ပွောငျးရှကွေ့ေးပေါငျသနျး(၂၀၀)အထိပေးပွီး ကမျးလှမျးမယျဆိုရငျ ရောငျးခသြှားမယျ့အနအေထားရှိတယျလို့ ဗွိတိနျမီဒီယာတှကေ ဖျောပွနကွေပါတယျ။ ဟာဇကျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတုနျးက ခယျြလျဆီးအသငျးက ထှကျခှာမယျလို့ အရိပျအမွှကျပွောဆိုခဲ့ပွီး ရီးယဲလျအသငျးကလညျး သူ့ကို ချေါဖို့ ပဈမှတျထားနတေယျ။ ဟာဇကျက”ခယျြလျဆီးအသငျးမှာ ကစားခဲ့တဲ့(၆)နှဈတာကာလအတှငျး အောငျမွငျမှု၊ ကရြှုံးမှုတှကေို ရငျဆိုငျဖွတျသနျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ အခုအခြိနျဟာ အပွောငျးအလဲတဈခုကို စတငျရတော့မယျ့ အခြိနျရောကျလာပါပွီ။ သခြောတာကတော့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားအပွီးမှာ ကြှနျတေျာ့အနာဂတျအတှကျ အဖွတေဈခုထှကျလာမှာပါ။ ခယျြလျဆီးမှာ ဆကျကစားမလား၊ လမျးခှဲမလားဆိုတာနဲ့ပတျသကျပွီး ကြှနျတေျာ့မှာ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခှငျ့ရှိပမေယျ့ Final Decision ကတော့ ခယျြလျဆီးအသငျးပဲ ခမြှတျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ ခယျြလျဆီးအသငျးက ကြှနျတေျာ့ကို ရောငျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျရငျ ဘယျအသငျးကို ကြှနျတျောသှားမလဲဆိုတာ ခငျဗြားတို့(မီဒီယာမြားကိုဆိုလို) သိပွီးသားပါပဲ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။
အခုအခြိနျမှာ ရီးယဲလျအသငျးကလညျး သူတို့ရဲ့ နာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo ကို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ ရောငျးခခြဲ့ပွီးဖွဈတာကွောငျ့ အဲဒီနရောမှာ အစားထိုးဖို့ ကစားသမားတဈဦး မဖွဈမနေ ချေါယူရမှာဖွဈပွီး ဟာဇကျကို ကွိုးပမျးဖို့ ပွငျဆငျနတောဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးကတော့ ဟာဇကျကို လှယျလှယျကူကူနဲ့ လကျလှတျခံဖို့ မရှိဘဲ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျသနျး(၂၀၀)အထိရမှ ရောငျးခသြှားမယျ့အနအေထားပါ။ ခယျြလျဆီးအသငျးအနနေဲ့လညျး ဟာဇကျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက PSG အသငျးကို လကျရှိကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ(၁၉၈)သနျးနဲ့ ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ နမော Neymar ထကျ ပိုတနျဖိုးရှိတယျလို့ ယုံကွညျနတောဖွဈပါတယျ။
ဟာဇကျဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့ (၂)နှဈစာခြုပျကနျြရှိနသေလို ခယျြလျဆီးအသငျးက သူ့ကို တဈပတျပေါငျ(၃)သိနျးအထိပေးပွီး ကမျးလှမျးဖို့ စီစဉျနတေယျလို့လညျး သတငျးတှထှေကျပျေါနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ ဟာဇကျကိုယျတိုငျက ရီးယဲလျအသငျးမှာ ကစားခှငျ့ရဖို့ ဆန်ဒရှိနပေုံရတာကွောငျ့ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ စာခြုပျသဈကမျးလှမျးမှုကို ငွငျးပယျမယျ့အနအေထားပါပဲ။ ဟာဇကျနဲ့ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ အပွောငျးအရှပေုံ့ပွငျက ဒီနှရောသီမှာ အဖွထှေကျလာမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .